Ao kosa ireo izao vao mba mahatsiaro ny vahoaka, raha ny fanazavan’ny kandida laharana fahavalo ao amin’ny boriborintany faharoa, José Christian Rafidison na José Bandy akama moa no ahafantaran’ireo mpiray fikambanana aminy sy ireo mpiara-monina aminy azy. Ny asa fanaovan-dalàna sy ny fijerena ny fiainan’ny mponina, hoy izy, dia tsy afa-misaraka. Tsy maintsy jerena ny maha olona eo amin’ny fiarahamonina. Be dia be ny tanora tsy an’asa, ankizy tsy miditra an-tsekoly, ny olana ara-pitsaboana ary sahirana vao mahazo rano fisotro madio ny mponina ety aminay na dia akaiky an’i Mandroseza aza. Anisan’ny hiadiako ny hisiana lalàna ahafahan’ireo mponina mahazo rano fisotro madio maimaimpoana satria tokony atao laharam-pahamehana izany. Tokony ho maimaimpoana sy tsy maintsy atao koa ny fampidirana ny zaza 4 taona an-tsekoly ary ny saram-pitsaboana, hoy hatrany i José Bandy akama.